Aqriso wax walba oo aad uga baahan tahay Copa America 2021… (Tirada xulalka, Guruubyada & xogaha muhiimka ah ee tartanka) - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
Aqriso wax walba oo aad uga baahan tahay Copa America 2021… (Tirada xulalka, Guruubyada & xogaha muhiimka ah ee tartanka)
June 9, 2021 at 08:46 Aqriso wax walba oo aad uga baahan tahay Copa America 2021… (Tirada xulalka, Guruubyada & xogaha muhiimka ah ee tartanka)2021-06-09T08:46:41+02:00 CAYAARAHA
(Ameerika) 09 Juun 2021. Xagaagan waxaa la ciyaara tartammo waaweyn oo heer qaran ah, waxaana isha lagu haayaa tartammada xulalka qaaradda Yurub iyo kuwa Koonfurta Ameerika taasoo la micno ah inay wada qabsoomi doonaan Euro 2020 iyo Copa America 2021.
Dalka Brazil, waxaa tartanka Copa America ku wada ciyaari doona 10 xul oo hoos taga xiriirka kubadda cagta Koonfurta Ameerika ee CONMEBOL, waana dhacdadii 47-aad ee tartanka xulalka Koonfurta Ameerika kaasoo markii hore loo jadwaleeyay inuu qabsoomo xagaagii hore balse xaaladihii Korona Fayras dartiis loogu soo wareejiyay xagaagan 2021.
Tirada kulammada la ciyaari doono, kulanka furitaanka, xilliga uu bilaaban doono & xilliga uu dhammaanayo:
Guud ahaan tartankan, waxaa la ciyaari doonaa 28 kulan, waxaana si toos ah u baahin doona BBC.
Ciyaarta furitaanka tartankan waxaa isku arki doona xulalka Brazil iyo Venezuela 13-ka bishan June, waxaana kulanka fiinaalka la dheeli doonaa 10-ka July, balse maadaama aysan isku xilli ahayn qaaradaha Koonfurta Ameerika iyo Geeska Afrika, waxay ku beegmi doontaa saacadaha hore ee 11-ka July, waana saacado kahor fiinaalka Euro 2020.
Halkii loo qorsheeyay in lagu ciyaaro & sababta haatan Brazil loogu soo wareejiyay:
Tartankan ayaa markii hore u qorsheysnaa inay marti geliyaan dalalka Colombia iyo Argentina, waxaana loo diiwaan gelin lahaa markii ugu horreysay ee Copa America ay laba dal wada jir u marti geliyaan tan iyo 1983, balse 31-kii bisha May ayaa tartankan marti gelintiisa loo baddelay dalka Brazil oo sidaas ku helaya marti gelinta tartanka markii labaad oo xiriir ah.
Colombia ayaa looga baqay xaalado ammaan maadaama shacabka dalkaas ay sameynayaan mudaahaaraadyo ay kaga soo hor-jeedaan dowladda dalkaas oo soo rogtay qorsho cusub oo la xiriira canshuurta.
Dhinaca kale, Argentina oo keli heli lahayd marti gelinta tartankan ayaa waxaa kusoo xoogeystay xanuunka Korona Fayras, waxaana guddiga fulinta ee xiriirka CONMEBOL uu go’aansaday inuu tartanka u wareejiyo dalka Brazil, kaasoo wali ay ka taagan tahay dood ku aaddan inay dadkeedu aqbalaan marti gelinta tartanka xagaagan.
Xulalka ka qayb galaya tartankan & hannaanka loo ciyaarayo:
Copa America sida caadiga ah waxaa ka qayb gala 12 xul oo labo ka mid ah ay ku imaadaan casuumaad, waxaana labadaas xul laga casuumaa Waqooyiga Ameerika iyo Aasiya si ay ugu biiraan 10 dal oo hoos taga xiriirka kubadda cagta Koonfurta Ameerika.
Australia iyo Qatar oo labadii jeer ee ugu dambeysay ku kala guuleystay tartanka qaaradda Aasiya ee Asian Cup ayaa kolkan lagu casuumay Copa America, balse waa ay isaga baxeen maadaama tartanka ay isku xilli bilaabanayaan kulammada is-reeb-reebka Koobka Adduunka 2022 ee xulalka Aasiya.
Sidaas darteed, waxaa sanadkan tartanka ciyaara 10-ka dal ee Koonfurta Ameerika kuwaasoo kala ah Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Peru, Uruguay iyo Venezuela.
Labo guruub ayaa loo qaybiyay 10-ka dal ee tartanka ciyaaraya, waxaana midkiiba ku jira shan xul, sidaas darteed, min afarta xul ee guruub walba u sarreeya ayaa ciyaari doona tartanka wareeggiisa Rubac-dhammaadka taasoo la micno ah in kaliya wareegga guruubyada ay ku hari doonaan min hal waddan guruubkiiba.
Magaalooyinka tartanka lagu ciyaarayo & garoonka marti gelinaya fiinaalka:
Afar ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee dalka Brazil ayaa tartankan lagu ciyaari doonaa waxayna kala yihiin Brasilia, Goiania, Cuiaba iyo Rio de Janeiro iyadoo ciyaarta fiinaalka lagu qaban doono garoonka taariikhiga ah ee Maracana stadium oo ku yaalla magaalada Rio de Janeiro.
« RASMI: Kiiskii labaad ee Korona Fayras oo laga helay xulka qaranka Spain
Ra’iisul wasaare Rooble oo magacaabay guddi kale oo doorasho + Ujeedka »